HORDHACA: Leicester City v Manchester United- Difaacdayaasha Horyaalka Premier League oo Wajahaya Kooxda Jose Mourinho + XOG & XAQIIQO | Laacibiin.net
Home » Falanqeyn » HORDHACA: Leicester City v Manchester United- Difaacdayaasha Horyaalka Premier League oo Wajahaya Kooxda Jose Mourinho + XOG & XAQIIQO
HORDHACA: Leicester City v Manchester United- Difaacdayaasha Horyaalka Premier League oo Wajahaya Kooxda Jose Mourinho + XOG & XAQIIQO	Leicester City ayaa eegi doonta in ay hesho xilli ciyaredkeedii saxda ahaa marka ay wajaheyso kooxda Manchester United, ciyaar la daawan doono 7:00 Pm cawa.
Kooxda heysata horyaalka Premier League ayaan wax gool ah dhalin afartii kulna ee ugu danbeysay Premier League, waxaana laga badiyay saddex kamid ah.
Jamie Vardy iyo Riyad Mahrez ayaa ku lug leh 28 gool oo Premier League isku dar waana tiro aad ugu yar xilli ciyaareedkii hore.
Tani waxaa ay bilow xun u tahay taariikhda Premier League ka dib 23 kulan la ciyaaray kooxda difaacaneysa Horyaalka, waana difaacashadii ugu xumaa horyaalka kubada cagta Ingariiska.
Si kastaba ha ahaatee, Leicester ayaa badisay 18 kulan laakiin waxay uruursadeen 21 kulamada au ku dheeleen King Power Stadium oo ay ku garaaceen xitaa Manchester City.
kooxda Man Utd ayaan laga badin 14 kulan ee ugu danbeyay Premier League, waana heerkoodii ugu wanaagsanaa.
Weeraryahanka baxsadka ah ee Leonardo Ulloa ayaa rajeynaya inuu usafto kooxdiisa Leicester kulankaan.
Weeraryahanka ayaa dib u bilaabay tababar fudud ee kooxdiisa, isagoo doonaya inuu dhiso maskaxdiisa markii uu ku xirmay suuqa.
Weeraryahanka kale Islam Slimani ayaa sidoo kale la maqan dhaawac gumaarka ah laakiin saxiixa cusub ee Molla Wague ayaa ciyaari kara ka dib markii uu amaah kaga soo biiray Udinese maalintii ugu danbeysay suuqa iyadoo Daniel Amartey uu kasoo laabtay Africa Cup of Nations oo uu kala qeyb galay xulka Ghana.
Phil Jones ayay u badan tahay inuu seegi doono kulanka Manchester United ay la qaadaneyso Leicester .
daafaca 24-sano jirka ah ayaa laga saaray garoonka 55 daqiiqo markii uu dhaawac soo gaaray kulankii Hull City waxaana booskiisa ciyaari doona Eric Bailly oo kasoo laabtay koobka qaramada Afrika.
Leicester City ayaa kaliya mid kamid ah badisay 17 kulan ee ugu dambeeyay Man Utd ay ku wajahday tartamada oo dhan gushaas ayaa timid bishii September 2014.
Manchester United ayaa kaliya qasaartay labo ka mid ah 21 kulan ee Premier League ugu dambeeyay oo ay booqdeen Leicester City.
kulankaan waxa uu noqon doonaa kii 2000th ee Leicester ka ciyaaran kubadda cagta Ingiriiska.
Vardy ayaa gacan ka geystay afar gool labadii kulan ee ugu dambeysay Premier League ee uu wajahay Manchester United isagoo kusugan King Power Stadium (labo gool ayuu dhaliyay, labana waa uu caawiyay).
Manchester United ayaa haatan ku jirta kulamadii ugu dheeraa oo aan bananaka looga soo badin waana lix kulan oo Premier League ah hore todobo kulan ayay u badiyeen iyagoo marti ah intii u dhaxeysay November 2014 iyo February 2015.
Link to this post:<a href="http://www.laacibiin.net/wararka/hordhaca-leicester-city-v-manchester-united-difaacdayaasha-horyaalka-premier-league-oo-wajahaya-kooxda-jose-mourinho-xog-xaqiiqo/">HORDHACA: Leicester City v Manchester United- Difaacdayaasha Horyaalka Premier League oo Wajahaya Kooxda Jose Mourinho + XOG & XAQIIQO</a>